Dad badan oo siyaabo laga maarmi karey ugu dhacey Kronofogden - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Dad badan oo siyaabo laga maarmi karey ugu dhacey Kronofogden
La daabacay torsdag 26 oktober 2017 kl 09.43
Dad farabadan ayaa ku dhacey ama galey liiska hey’adda qaamaha ”kronofogden” ka dib markii ey bixin waayeen amaaho ey dhanka waxbarashadooda horey ugu qaateen, taas oo laga maarmi karey.
Sidaasna waxaa lagu muujiyey warbixin ey soo saartey hey’adda kaalmeynta waxbarashada ee CSN.
Qiyaastii dad gaaraya ilaa iyo 86 000 oo qof ayaa sanadkii hore waxay galeen liiska hey’adda qaamaha ”kronofogden” ka dib markii ey bixin waayeen aamaahdii waxbarasha ahaan ey horey uga qaateen hey’adda kaalmeynta waxbarashada ee CSN.
Qiyaastii boqolkiiba 40 ama 38 000 oo qof ayaa ka maarmi karey ama ka hortagi karey in ey galaan ama ku dhacaan liiska madow ee hey’adda qaamaha ”kronofogden” maadaama dakhliga soo galaa uu hoseeyey, xaqna ey u lahaayeen in ey bixiyaan lacago intii laga rabey ka yar si ey dhibkaas uga badbaadaan.
Maria Edström oo ka hwlgasha xarunta hey’adda kaalmeynta waxbarashada ee CSN ayaa iyadoo arrinkaan ka hadleysa waxay tiri :
- Waxaan qabaa in wax laga xumaado ey tahay in dad aad u yari ogaayeen in dhacdadaas aan loo baahneyn ee ey dadkaasi liiska hey’adda qaamaha ”kronofogden” ugu dheceen si sahlan looga maarmi karey, ayey tiri Maria Edström.
Maria Edström ayaa intaas ku dartey in hey’addooda kaalmeynta waxbarashada CSN, looga baahan yahay in ey si xoog leh ugu dhabagasho uguna hawlgasho warbixinaha arrinkaas la xiriira, si sida ugu haboona ey xiriir dhow ula yeeshaan dadka macaamiisha la leh. Dhanka kalana qaar badan oo dadkaas ka mid ah ayaan arrinkaan ku sirmin balse waxay ku sugan yihiin xaalad nololeed oo adag, waxaanuna dadka bixinta deynkaasi ey dhibi ka heysato ka cosaneynaa in ey la soo xiriiraan hey’adda kaalmeynta waxbarashada ee CSN, maadaama ey jiraan fursado dhibaatadaas looga maarmi karo, ayey tiri Maria Edström.
Hey’adda kaalmeynta waxbarashada ee CSN ayaa si ey xal arrinkaan ugu hesho waxay bilowdey in ey wacdo ama dhanbaalka SMS-ka u dirto dhamman dadka da’ ahaan gaarey 29 sano oo deyma ey waxbarashadooda dartiis u qaateen laga yaabo in ey ugu dhacaan liiska hey’adda qaamaha ee ”kronofogden”, talaabadaas oo hoos u dhigey tirada dadkii ku dhici lahaa liiska hey’adda qaamaha.